भारतको २००१ को जनगणनाको अनुसार कवरत्तीको कुल जनसङ्ख्या १०११३ छ, जसमा पुरुष ५५% र महिला ४५ % प्रतिशत छन् । कवरत्तीको साक्षरता दर ७८% छ, जुन राष्ट्रीय औसत ५९.५% देखि धेरै छ । पुरुष साक्षरता ८३% र महिला साक्षरता ७२% छ । कवरत्तीको १२% जनसङ्ख्या ६ वर्षदेखि कम आयुको बच्चा को हो ।
2. पर्यटन आकर्षण
कवरत्ती द्वीपको अनूप क्षेत्र पानीको खेल, तैराकीको लागि आदर्श स्थल हो र वहाँको रेतीला सागर तट घाम ताप्नको लागि आदर्श छ । पर्यटक समुद्री जीवनसग सम्बन्धित विशाल संग्रहको आनन्द यहाको समुद्री सङ्ग्रहालयमा पाइन सकिन्छ । काँचको तले वाला नौकाले अनूपको जलीय जीवनको जीवन्त र रमणीक दृश्यावलोकन पनि धेरै लोकप्रिय छ । कयाक र पाल नौकाय नौकायनको लगि किराएमा उपलब्ध छ ।
3. अलवणीकरण संयन्त्र
भारतको पहिलो कम तापमान अलवणीकरण संयन्त्र LLTD कवरतीमा मे २००५ मा खोलिएको थियो । यस अलवणीकरण संयंत्रलाई पाच करोड रुपयेको लागतले स्थापित गरिएको छ र यसबाट समुद्रको पानी सधै १००,००० लीटर पीन योग्य पानीको उत्पादनको आशा छ ।
4. लक्षद्वीप केन्द्र शासित
साक्षरता दर%: ८६.७
जनसङ्ख्या घनत्व: १८९५
गाउँको संख्या: २४
जिल्ला संख्या: ९
जनसङ्ख्याको पूरा जनसङ्ख्याको प्रतिशत: ४४.५